Haweeney seygeeda kelli ugu deeqday dhowr sano ka hor oo hadda dalbatay in uu usoo celiyo - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, Ahaber TV
Balse Maviş Erdoğan ayaa ka carootay "sida ninkeeda uu ula dhaqmay", waxayna kasoo muuqatay barnaamij ka baxa telefishenka Ahaber ee dalka Turkiga, iyadoona dalbatay in ninkeeda uu usoo celiyo kellidii ay ugu deeqday dhowr sano kahor.
"Waxaan siiyay kellideyda, sababtuna waxay ahayd in aan noolal wadaagno,"ayay tiri Maviş Erdoğan oo la hadleysay telefishenka Ahaber.
Hase yeeshee arrintan dad badan ka yaabisay ayaa ah in seygeeda Axmet Erdoğan uu xaqiijiyay in waxwalba oo dhexmaray isaga iyo xaaskiisa, wuxuuna yiri "maba ahaynba in ay isiiso kellideeda xilligaas".
"Cunugeyga wuxuu galay qalliin, anniga ayaa raadsaday lacagta qalliinka oo cidna ma wedyiin, qof i taageerayna malahan, dhib badan ayaa uso maray seygeeda", ayay raacisay hadalkeeda.
Haweeneydan oo ilmeyneysay iyadoo si toos ah looga wareysanayo telefishenka Ahaber ayaa sheegtay in ay ka dhaadhici weyday "waxa uu ku sameeyay seygeeda".
"Waxaan la daalaa dhacayaa sidii aan hal kelli ugu noolaan lahaa iyo korinta cunigiis, waxaan siiyay noolasheyda, haddana waxaan rabaa in uu kellideyda isoo celiyo", ayay raacisay hadalkeeda.
TOOS Hoggaamiyaha gobolka Amxaarada oo dadkiisa ugu baaqay inay hubka qaataan